Oké Osimiri Cantabrian: njirimara, ọdịdị ala, ihu igwe na ụdị ndụ dị iche iche | Netwọk Mgbasa Ozi
Northern Spain mebiri site na Oke Osimiri Cantabrian. Ọ dị nso na ụsọ oké osimiri Europe nke North Atlantic. Ọ bụkwa ya na-ahụ maka ịsa ahụ n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke France. O nwere aha ndi ozo dika Bay of Biscay na Bekee na French dika Golfe de Gascogne. Ọ bụ mpaghara mmiri jupụtara na mmiri dịgasị iche iche na ebe a na-azụ azụ maka ọnọdụ Spanish.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, geology na ụdị dị iche iche nke Oke Osimiri Cantabrian.
2 Ọdụ ụgbọ mmiri nke Osimiri Cantabrian na ihu igwe
3 Ihe ndi di iche iche nke Osimiri Cantabrian
Ọ bụ oke osimiri nwere ndọtị nke ihe dị ka kilomita 800 site na Cape Ortegal dị na Galicia, ruo Punta de Penmarch na French Brittany. N'agbanyeghi oke osimiri nke adighi oke nha, o nwere oke omimi di omimi. Ma nke ahụ bụ omimi ya Oke Ronda 4.750 mita ma dị na Carrandi Trench, nke dị n'ụsọ oké osimiri Asturian.
Ka anyị na-aga ebe ugwu dị nso na France, Osimiri Cantabrian na-ebelata na omimi. O nwere nnu nnu nke ihe dika gram 35 kwa lita, obu ezie na o di ala nke ukwuu na nso ikpere mmiri. Karịsịa n’ọnụ nnukwu osimiri ndị dị ike dịka Garonne ma ọ bụ Loire na France, nnu nnu na-ebelata ọkachasị n’ihi mmiri dị mma nke osimiri ndị a na-eweta.
Nyere ya obere size, ọ na-akasị emetụta tides. Mgbe ụfọdụ ebili mmiri na-erute njupụta nke mita 4.5. Uzo nke a na-enyocha n'ụsọ oké osimiri dum ziri ezi. Nanị atụmatụ ala nwere ike ime ka ọ pụta ìhè na mpaghara ndị a bụ Bay of Biscay, na ókèala Franco-Spanish, Capes of Pañas, Ajo na Machichaco, yana bays nke Santander, Arcachon ma ọ bụ La Rochelle, na ndị ọzọ.
Ọ na-asakwa n'ụsọ osimiri nke agwaetiti ndị dị na mpaghara French. Agwaetiti ndị a bụ Oleron, Re, Yeu na ndị ọzọ.
Ọdụ ụgbọ mmiri nke Osimiri Cantabrian na ihu igwe
Anyị ga-enyocha nke bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke Osimiri Cantabrian:
Ọdụ ụgbọ mmiri dị na Spain: Ndị a bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke Gijón, Santander na Bilbao. Portsgbọ mmiri atọ a nwere njikọ ụgbọ mmiri na mpaghara ndịda nke England na akụkụ France.
Ọdụ ụgbọ mmiri dị n'ụsọ oké osimiri France: bụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị aha Bayonne, Biarritz, Saint Jean de Luz na La Rochelle maara.
N'akụkụ ụsọ mmiri Cantabrian, e nwere ọtụtụ ebe a na-eme n'akụkụ oké osimiri yana ụfọdụ ụsọ mmiri ndị ndị njem na-akwụ ụgwọ nke ukwuu. Ma ọ bụ na ebe a enwere ọchịchị nke ifufe na-eweta oke ebili mmiri zuru oke iji gaa n'ebe ndịda.
Ugbu a, anyị ga-enyocha ihu igwe dị na mpaghara Osimiri Cantabrian. N'oge oyi na mpaghara a, oké ifufe a maara dị ka gale na Oké mmiri ozuzo na-esonyere ha, ifufe na ebili mmiri nke ruru mita 7 na elu. Ọ na-enwekarị okpomọkụ dị ogologo n'ime afọ. Agbanyeghị, mmiri dị n’elu mmiri sitere na ogo 11 n’oge udu mmiri rue ogo 22 n ’oge ọkọchị.
Ihe ndi di iche iche nke Osimiri Cantabrian
Na mmiri nke oké osimiri a biri ọtụtụ ụdị anụmanụ. Ọ bụ ama ama maka inwe ọtụtụ ụdị anụ ọhịa. N'etiti ụdị anụ ọhịa a kacha mara amara na nke ndị njem nleta na-achọ, anyị na-ahụ Cuvier's Beaked Whale, nke dị ụkọ na oke osimiri Europe. Ọzọkwa, ị pụrụ ịhụ ụfọdụ ụdị nke North Atlantic Right Whale. Nke a nwere nnukwu mmasị ndị njem, ebe ọ bụ na o juputara, ọ bụ ụdị nke fọrọ nke nta ka ọ funahụ na narị afọ nke ịkụ azụ na-enweghị atụ site n'aka ndị whalers Basque. Enwere ọtụtụ mmetụta gburugburu ebe obibi, ọ bụghị naanị site na ịkụ azụ nke whale ndị a, mana site na mmetọ nke mmiri na mbibi nke ebe obibi.
Anụmanụ ndị ọzọ dị n’ime mmiri a pụtara n’oké osimiri a bụ anụ whale dị mma, sperm whale, porpoise na ụdị ụfọdụ nke dolphins. N'ebe ọwụwa anyanwụ nke ọnụ mmiri ahụ, anyị hụrụ mbara ala ebe nkume nzu nzu dịkarịsịrị ike, ịbụ karst oge adịghị mma nke nwere ọtụtụ na ọtụtụ n'ụdị vault. Onye ọ bụla nke ọnụ ọnụ ugwu ndị a dị ihe dị ka mita 300-400 n'ogologo, ụnyaahụ otu n'ime ha dị na Hermitage nke San Pedro de Atxarre.
Otu n'ime osisi oak Holm nke kachasị ukwuu ma chekwaa nke ukwuu n'ụsọ mmiri Cantabrian niile na ụwa na-etolite na ala limestone. Ọ bụ oke ọhịa, ochie na nke mepere emepe nke nwere nnukwu obodo nke mammals. Nyere njupụta nke ahịhịa, a pụrụ ịchekwa anụmanụ ndị na-enye ara ara ma zoo ha n'ihe egwu.
N'ime anụmanụ ndị na-apụ n'ọhịa a, anyị nwere anụ ọhịa, mink, nkịta ọhịa na mgbada. N'ihi oke ọhịa, ọ nwere ike inye ha nnukwu acorns, osisi strawberry na mkpụrụ osisi nri ndị ọzọ na ebe zoro ezo iji chebe onwe ha.
N'ikpeazụ, anyị ga-enyocha nke bụ isi osimiri dị na Osimiri Cantabrian.
Osimiri Laida: Ọ bụ nke kachasị ukwuu na ogologo oge, mana nha ya na-ebelata oge na-aga n'ihi ụkọ ahịhịa. Agbalịrị imeghari ugwu ahụ, mana ọ kpochapụrụ mgbe oke mmiri mmiri na 50s.
Osimiri Laidaxu: ọ pere mpe na mbụ, ruo n’ókè nke na mgbe ebili mmiri dị elu ọ na-apụ n’anya kpam kpam. A na-edobe ya nke ọma ma ọ na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ na mpaghara a. Ọtụtụ na-ewere ohere iji gaa n'ụsọ osimiri a tupu na n'oge ọkọchị ebe ọ na-ejigide ọnọdụ okpomọkụ dị mma. Otú ọ dị, a na-ekpughe mmiri ndị dị ugbu a, ya mere enwere azụ iji belata mmiri.
Osimiri Larga: ọ bụ otu n'ime ndị njem nleta na-ekwo ekwo. Ọ bụ Cape Ogoño nke mebere site na limestone mass nke Cantabrian holm oak grove kpuchie. Ọ na-agbadata n’ebe dị elu nke narị mita atọ n’oké osimiri.
San Antonio Beach: Ọ dị n'ime ala ma nwee ọtụtụ ebe dị iche iche. Na otu aka anyị nwere Sukarrieta osimiri na keakamere ájá na e guzobere mgbe a karama na nke dịpụrụ adịpụ ma pụta na elu tide. Ọ bụ ụsọ mmiri dị oke egwu n'ihi mmiri ugbu a, mana mgbe ọ dị obere mmiri na-enye ohere ịga ije na mmiri.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oke Osimiri Cantabrian na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke Osimiri Cantabrian